विश्वकप सेमिफाइनलः अब न्यूजिल्याण्डले ब्याटिङ नगरे भारतले कति रनको लक्ष्य पाउला? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकप सेमिफाइनलः अब न्यूजिल्याण्डले ब्याटिङ नगरे भारतले कति रनको लक्ष्य पाउला?
काठमाडौं, असार २४ । इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनल अन्तर्गत भारत र न्यूजिल्याण्डबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिएको छ । न्यूजिल्याण्डले ४६.१ ओभरमा ५ विकेटको अवस्थामा वर्षा परेपछि खेल रोकिएको हो ।
नेपाली समयअनुसार १२ः३५ सम्म अम्पायरले खेलको फैसला गर्नसक्ने छन् । त्यतिबेलासम्म पनि वर्षा नरोकिएमा न्यूजिल्याण्डले दोस्रो पटक ब्याटिङ गर्न पाउने छैन । त्यसकारण डकवर्थ लुइसका आधारमा भारतले ४६ ओभरमा २३७ रनको लक्ष्य पाउने छ । यदि वर्षा केही समयभित्र रोकिएमा भारतको पारीको ओभर घटाइने छ ।
याे पनि पढ्नुस वर्षाका कारण प्रभावित नेपाल र बंगलादेशबीचको क्रिकेट सुरु
२० ओभरमा झारिएमा भारतले १४८ रनको लक्ष्य पाउने छ । जारी विश्वकपको सेमिफाइनल खेलाका लागि रिजर्भ डेको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपि यो अन्तिम उपाय हो । न्यूजिल्याण्डले दोस्रो पटक ब्याटिङ नगरेमा भारतले पाउन सक्छ यस्तो लक्ष्य४० ओभरमा २२३ रनको लक्ष्य–
याे पनि पढ्नुस सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदः क्रिकेटमा एपिएफ र मध्यमाञ्चल विजयी
३५ ओभरमा २०९ रनको लक्ष्य
३० ओभरमा १९२ रनको लक्ष्य
२५ ओभरमा १७२ रनको लक्ष्य
२० ओभरमा १४८ रनको लक्ष्य
ट्याग्स: Cricket, New Zealand Vs India